Warshadda daaha ka ilaalisa dabka Shiinaha Cable iyo soosaarayaasha | Weicheng
Magaca Badeecada Dahaarka dabka ka dillaaca
Qaabka Soocista 25kg / foosto
Baaxadda Codsiga Waxaa si weyn loogu adeegsadaa daaweynta nabarrada iyo fiilooyinka dhirta tamarta, warshadaha iyo
macdanta, isgaarsiinta iyo dhismayaasha shacabka;
sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ka hortagga dabka qoryaha
qaabdhismeedyada, qaababka birta, iyo kuwa guban kara
substrates ee injineernimada dhulka hoostiisa.
Faa'iidooyinka Badeecada 1. Filim caato ah iyo caabbinta dabka oo aad u fiican2. Dhisme fudud, cadayasho, buufin, iwm.
3. U adkaysiga dabka iyo u adkaysiga biyaha
4. Lakab labbisan oo isbuunyo cufan leh ayaa la sameeyaa dab ka dib,
kaas oo leh saameyn weyn oo dab iyo kuleylka kuleylka ah
Nooca CDDT-AA ee nooca dabka ka celiya dabka ayaa ah nooc cusub oo ka mid ah daaha ka hortaga dabka oo ay soo saartay shirkadeena iyadoo la raacayo heerarka wasaarada amniga bulshada GA181-1998. Shayga wuxuu ka kooban yahay dhammaan noocyada dab-damiska, bacrimiyeyaasha iwm. Waa xadhiga horumarsan ee biyaha iyo korontada dalka.
Badeecadani waxaa si weyn loogu isticmaalaa daaweynta dab damiska ee fiilooyinka iyo fiilooyinka dhirta korantada, miinooyinka, isgaarsiinta iyo dhismooyinka madaniga ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ka hortagga dabka waxyaabaha guban kara ee qaab dhismeedka alwaax, dhismayaasha qaab dhismeedka birta iyo injineernimada dhulka hoostiisa ah.
Kahor dhismaha dahaadhka dab-damiyaha, boodhka sabaynaysa, wasakhda saliida iyo qorraxda dusha sare ee fiilada waa la nadiifin doonaa waana la nadiifin doonaa, waxaana la samayn karaa samaynta dab-damis dab-damis ah ka dib marka dusha sare uu qalalo.
Dahaarka dab-damiska ee fiilada waa in la buufiyaa oo la cadeeyaa, waana in si buuxda loo isku daraa oo si siman loo adeegsadaa. Marka dahaadhku waxyar dhumucdiis yahay, waxaa lagu qasi karaa qaddarka saxda ah ee biyaha tuubada si loo fududeeyo xereynta.
Dahaarka biyaha iyo wasakhda ka hortagga ah waa in lagu ilaaliyaa waqtiga iyo kahor dhismaha.
Fiilooyinka iyo fiilooyinka leh maqaarka balaastigga ah iyo kuwa caagga ah, dhumucda dusha sare waa 0.5-1 mm, xaddiga dahaadhkuna wuxuu qiyaastii yahay 1.5 kg / m, ee xarigga dahaaran ee lagu buuxiyey warqadda saliidda, lakabka maro galaas ah ayaa marka hore la duudduubi doonaa , ka dibna daahan ayaa la marin doonaa. Haddii dhismaha lagu fuliyo banaanka ama jawiga qoyan, varnish u dhiganta waa lagu dari doonaa.
Dahaarka dabka aan dabka ka xirnayn waa in lagu buuxiyaa bir ama foosto caag ah.
Dahaarka dab-demiska ee fiilada waa in lagu keydiyaa jawi qabow, qalalan oo hawo leh.
Markaad safreyso, sheyga waa in laga ilaaliyo qorraxda.
Muddada keydinta wax ku oolka ah ee daboolka cawda ee dab-damiska waa hal sano.
Hore: Dahaadh dabacsan oo dabacsan
Xiga: Maro dab-damis ah iyo Tape Silikoon